Nhau - Iyo yakakura maitiro mukusakura, nei kusakura jira?
1. Dzora sora mumunda wemichero
Micheka yekusakura yebindu dema inochengetedza zuva kubva pasi uye chimiro chayo chakasimba chinoita kuti micheka ichengetedze sora kubva pasi. Kunyanya muminda yemichero ine zvikomo uye mumakomo, pasi harina kuti sandara uye kune matombo akawanda. Mulching, kusakura nekusakura nemaoko zvinonetsa kuita. Micheka yekusakura ine zvakanakira kudzora sora. Ongororo dzakawanda dzakaratidza kuti kuisa machira emasora matema pakati pemitsara yeminda yemichero kunogona kudzora zvachose kukura kwesora uye kune zvakanakira pane mamwe makemikari uye asiri emakemikari nzira dzekusakura.
2. Kuvandudza kushandiswa kwekudya kunovaka muviri
Mushure mekuisa jira rekusakura, chengetedza unyoro hwevhu mumuti wemuti, wedzera nzvimbo yepamusoro yemidzi yemiti, uye uwedzere kutora kudya.
3. Wedzerai goho
Nekuvhara bindu nemucheka wemasora pakati pemitsara miviri yebindu, unyoro hwevhu hunochengetedzwa uye kuwanikwa kwekudya kunovandudzwa zvikuru, uye zvibereko zvezvibereko zvinovimbiswa kuwedzera. Zvidzidzo zvakaratidza kuti kuvhara nemachira ekusakura zvakanyanya kuwedzera goho reGreek basil, rosemary uye yakasimwa maBrussels nhungirwa uye broccoli. Mhedziso yakafanana yakasvika pamiti yemichero. Mushure mekuvhara nemishonga yesora, kudya kwemashizha eapuro kwakasiyana nemwaka wekukura. Hunhu hwemuti uye goho zvaive zvakakwirira pane izvo zvakarapwa pasina jira repasi.
4. Chengetedza unyoro hwevhu
Kuvhara weeding jira kunogona kudzivirira vertical evaporation yemvura yevhu, kuita mvura transversal migration, kuwedzera kupikisa kwekubuda kwemvura, uye zvinobudirira kurambidza kusavapo kwemvura yevhu. Kusakura mulch hakungodzore masora chete, asiwo kunoderedza kubuda kwemvura uye kunowedzera hunyoro hwevhu.
Biodegradable Weed Control Fabric, Kusakura Mumucheka, Heavy Duty Weed Barrier, Pp Woven, Mvura Inopindira uye Inofema Weeding Mucheka, Weed Control Fabric Roll,